HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kamba Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mizo Mongol Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Tshiluba Tsonga Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa
“Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.”—1 KOR. 11:24.
Mifanitsy amin’ny inona ny mofo sy ny divain’ny Fahatsiarovana?
Ahoana no ampisehoan’ny Kristianina fa mankasitraka ny fanantenana nomen’Andriamanitra azy izy ireo?
1, 2. Inona no nataon’i Jesosy ny alin’ny 14 Nisana taona 33? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
NANAZAVA an’i Jerosalema ny taratry ny volana fenomanana, tamin’ny alin’ny 14 Nisana taona 33. Nankalaza ny Paska i Jesosy sy ny apostoliny, ho fahatsiarovana ny nanafahana ny Israelita tany Ejipta 1 500 taona talohan’izay. Nisy sakafo manokana niarahan’i Jesosy nihinana tamin’ny apostoly 11 tsy nivadika avy eo. Hankalaza azy io isan-taona ny mpanara-dia azy, ho fahatsiarovana ny nahafatesany tamin’io andro io. *—Mat. 26:1, 2.
2 Nivavaka i Jesosy ary natolony an’ireo apostoly ny mofo tsy misy lalivay. Hoy izy: “Raiso ity, ka hano.” Nandray kaopy misy divay koa izy, nivavaka, ary niteny hoe: “Misotroa amin’ity ianareo rehetra.” (Mat. 26:26, 27) Tsy nisy sakafo hafa natolony azy ireo. Mbola nisy zavatra nolazainy tamin’ireo mpianany tsy mivadika anefa tamin’io fotoana miavaka io.
3. Inona no fanontaniana hodinihintsika ato?
3 Tian’i Jesosy hahatsiaro ny nahafatesany na hankalaza “ny Sakafo Harivan’ny Tompo” ny mpianany. (1 Kor. 11:20) Mety hisy hanontany hoe: Nahoana no ankalazaina ny nahafatesan’i Jesosy? Mifanitsy amin’ny inona ny mofo sy ny divay? Ahoana no hiomanantsika amin’ny Fahatsiarovana? Iza no tokony hihinana ny mofo sy hisotro ny divay? Ary ahoana no ampisehoan’ny Kristianina fa mankasitraka ny fanantenany izy?
NAHOANA NO ANKALAZAINA NY NAHAFATESAN’I JESOSY?
4. Inona no azo antenaina noho i Jesosy maty?
4 Taranak’i Adama isika ka nandova ota sy fahafatesana. (Rom. 5:12) Tsy misy olona tsy lavorary afaka manome vidim-panavotana ho an’Andriamanitra, mba hanavotana ny ainy na ny ain’ny hafa. (Sal. 49:6-9) Ny vidim-panavotana nomen’i Jesosy ihany no azo nekena. Nanome izany izy rehefa maty ka nahafoy ny vatany lavorary sy nandatsaka ny rany. Natolony an’i Jehovah ny vidin’ny ra nalatsany ka lasa azo afahana amin’ny ota sy ny fahafatesana isika sady afaka manantena hiaina mandrakizay.—Rom. 6:23; 1 Kor. 15:21, 22.
5. a) Nahoana isika no milaza fa tia ny olombelona Andriamanitra sy Kristy? b) Nahoana isika no tokony hanatrika Fahatsiarovana?
5 Tena tia ny olombelona Andriamanitra matoa nanome ny vidim-panavotana. (Jaona 3:16) Tia antsika koa i Jesosy matoa nanao sorona ny ainy. “Mpiasa tena mahay” teo anilan’i Jehovah izy talohan’ny naha olombelona azy, ary ‘tena tiany izay rehetra mombamomba ny zanak’olombelona.’ (Ohab. 8:30, 31) Hanatrika ny Fahatsiarovana ny nahafatesan’i Jesosy isika raha mankasitraka an’i Jehovah sy ny Zanany, ka hankatò ilay didy hoe: “Ataovy hatrany izao ho fahatsiarovana ahy.”—1 Kor. 11:23-25.
NY MIFANITSY AMIN’NY MOFO SY DIVAY
6. Inona no tokony ho fantatsika momba ny mofo sy ny divain’ny Fahatsiarovana?
6 Tsy nanao fahagagana mba hanovana ny mofo sy ny divay ho lasa tena nofony sy rany i Jesosy, tamin’ilay Fahatsiarovana voalohany. Hoy kosa izy momba ilay mofo: ‘Midika ho vatako ity.’ Hoy koa izy momba ny divay: ‘Midika ho rako ity, dia “ny ran’ny fifanekena” izay halatsaka ho an’ny maro.’ (Mat. 26:26-28, f.a.p.) Nampiasaina hanaovana fampitahana fotsiny àry ny mofo sy ny divay.
7. Mifanitsy amin’ny inona ilay mofo?
7 Ambina mofo tsy misy lalivay tamin’ny sakafon’ny Paska no nampiasain’i Jesosy tamin’io fotoan-dehibe io. (Eks. 12:8) Ilazana ny faharatsiana na ny ota indraindray ny lalivay, ao amin’ny Baiboly. (Mat. 16:6, 11, 12; Lioka 12:1) Mifanitsy amin’ny vatan’i Jesosy tsy misy ota àry ilay mofo tsy misy lalivay nampiasainy. (Heb. 7:26) Mofo tsy misy lalivay koa no ampiasaina rehefa Fahatsiarovana.
8. Mifanitsy amin’ny inona ilay divay?
8 Mifanitsy amin’ny ran’i Jesosy ilay divay nampiasainy tamin’ny 14 Nisana taona 33. Toy izany koa ilay divay ampiasaintsika rehefa Fahatsiarovana. Tao Golgota tany ivelan’i Jerosalema i Jesosy no maty sy nandatsaka ny rany “ho famelan-keloka.” (Mat. 26:28; 27:33) Mifanitsy amin’ny sorona lafo vidy nataony mba hamonjena ny olona mankatò ny mofo sy ny divain’ny Fahatsiarovana. Ankasitrahantsika io porofom-pitiavana io ka hiomana isika tsirairay mba hankalaza ny Sakafo Harivan’ny Tompo atao isan-taona.
AHOANA NO HIOMANANA?
9. a) Nahoana no ilaina ny manao ny famakiana Baiboly amin’ny Fahatsiarovana? b) Inona no tsapanao rehefa mieritreritra ny vidim-panavotana?
9 Afaka misaintsaina an’izay nataon’i Jesosy taloha kelin’ny nahafatesany isika, raha manao ny famakiana Baiboly amin’ny Fahatsiarovana, izay hita ao amin’ny Fandinihana ny Soratra Masina Isan’andro. Hanomana ny fontsika izany. * Hoy ny anabavy iray: ‘Tsy andrintsika ny Fahatsiarovana. Lasa misy heviny kokoa ho antsika izy io isan-taona. Tadidiko aho nijery an’i Dada malalako tamin’izy maty. Nanjary tena nankasitraka ny hasarobidin’ny vidim-panavotana aho tamin’izay. Marina fa haiko tsara daholo ny andinin-teny momba azy io sy ny manazava azy ireny. Rehefa nidonam-pahoriana anefa aho vao tena tsapako fa hitondra soa ho antsika ny vidim-panavotana. Faly aho nieritreritra izany.’ Rehefa miomana amin’ny Fahatsiarovana àry, dia tsara ny misaintsaina hoe manafaka antsika amin’ny ota sy ny fahafatesana ny soron’i Jesosy.
Ampiasao ny fitaovana nomena antsika mba hanomanana ny fonao ho amin’ny Fahatsiarovana (Fehintsoratra 9)
10. Inona koa no azontsika atao mba hiomanana amin’ny Fahatsiarovana?
10 Azo atao koa ny manompo bebe kokoa, ka angamba hanao mpisava lalana mpanampy mandritra ny vanim-potoan’ny Fahatsiarovana. Ho faly isika rehefa manasa ny mpianatra Baiboly sy ny olon-kafa hanatrika Fahatsiarovana. Miresaka momba an’Andriamanitra sy ny Zanany mantsy isika amin’izany, ary mampahafantatra ny fitahiana miandry an’izay mampifaly an’i Jehovah sy midera azy.—Sal. 148:12, 13.
11. Nahoana ny Korintianina sasany no lazaina fa nihinana ny mofo sy nisotro ny divay tamin’ny fomba tsy mendrika?
11 Hanampy anao hiomana amin’ny Sakafo Harivan’ny Tompo koa ny fisaintsainana an’izay nosoratan’ny apostoly Paoly ho an’ny Kristianina tao Korinto. (Vakio ny 1 Korintianina 11:27-34.) Nilaza izy fa “meloka ny amin’ny vatan’ny Tompo sy ny rany” izay mihinana ny mofo sy misotro ny divay amin’ny fomba tsy mendrika. Tokony “handini-tena tsara” aloha ny voahosotra iray “raha mendrika”, izay izy vao hihinana ny mofo sy hisotro ny divay. Raha tsy izany dia “mihinana sy misotro fanamelohana ho an’ny tenany” izy. Maro ny Korintianina tsy nitondra tena tsara ka lasa osa sy narary ary “nodimandry” na maty ara-panahy. Nisy angamba nihinana na nisotro be loatra talohan’ny Fahatsiarovana na nandritra izany, ka lasa tsy nisaina tsara na natoritory ara-panahy. Tsy nankasitrahan’Andriamanitra izy ireo, satria nihinana ny mofo sy nisotro ny divay tamin’ny fomba tsy mendrika.
12. a) Noharin’i Paoly tamin’ny inona ny Fahatsiarovana, ary inona no fampitandremany? b) Tokony hanao inona ny olona mihinana ny mofo sy misotro ny divay raha manao fahotana lehibe?
12 Toy ny sakafo iaraha-mihinana ny Fahatsiarovana, hoy i Paoly. Nampitandremany àry ireo mihinana ny mofo sy misotro ny divay hoe: “Tsy afaka ny hisotro amin’ny kaopin’i Jehovah sy ny kaopin’ny demonia ianareo. Tsy afaka ny hihinana amin’ny ‘latabatr’i Jehovah’ sy ny latabatry ny demonia ianareo.” (1 Kor. 10:16-21) Ary ahoana raha manao fahotana lehibe ny olona iray efa mihinana ny mofo sy misotro ny divain’ny Fahatsiarovana? Tokony hitady fanampiana amin’ny anti-panahy izy. (Vakio ny Jakoba 5:14-16.) Raha mamoa “voa mifanentana amin’ny fibebahana” izy, dia tsy manazimbazimba ny soron’i Jesosy rehefa mihinana ny mofo sy misotro ny divay.—Lioka 3:8.
13. Nahoana no ilaina ny mivavaka momba ny fanantenana nomen’Andriamanitra antsika?
13 Inona koa ny fiomanana azo atao? Tsara ny misaintsaina sy mivavaka momba ny fanantenana nomen’Andriamanitra antsika, na hiaina eto an-tany isika na ho any an-danitra. Manazimbazimba ny soron’i Jesosy izay mihinana ny mofo sy misotro ny divain’ny Fahatsiarovana, nefa tsy manana porofo mazava hoe voahosotra. Tsy tokony hanao izany mihitsy ny Kristianina nanokan-tena. Ahoana àry no amantarana raha tokony hihinana ny mofo sy hisotro ny divay isika na tsia?
IZA NO TOKONY HIHINANA NY MOFO SY HISOTRO NY DIVAY?
14. Inona no ataon’ny voahosotra rehefa Fahatsiarovana, noho izy ireo nanaovana an’ilay fifanekena vaovao?
14 Ireo tena mahazo antoka fa nanaovana an’ilay fifanekena vaovao no manana zo hihinana ny mofo sy hisotro ny divain’ny Fahatsiarovana. Hoy i Jesosy momba ny divay: “Ity kaopy ity no fifanekena vaovao miorina amin’ny rako.” (1 Kor. 11:25) Nilaza i Jehovah fa hanao fifanekena vaovao izy, ary tsy toy ny fifaneken’ny Lalàna nataony tamin’ny Israelita izy io. (Vakio ny Jeremia 31:31-34.) Ny Israelita ara-panahy no nanaovan’i Jehovah ny fifanekena vaovao. (Gal. 6:15, 16) Mampanan-kery azy io ny ra nalatsak’i Kristy tamin’izy natao sorona. (Lioka 22:20) I Jesosy no Mpanelanelana amin’io fifanekena io, ary mahazo lova any an-danitra ireo voahosotra tsy mivadika nanaovana azy io.—Heb. 8:6; 9:15.
15. Iza no nanaovana ny fifanekena ny amin’ilay Fanjakana, ary inona no miandry azy ireo raha tsy mivadika izy ireo?
15 Fantatr’ireo manan-jo hihinana ny mofo sy hisotro ny divay fa nanaovana an’ilay fifanekena ny amin’ilay Fanjakana izy ireo. (Vakio ny Lioka 12:32.) Hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra ireo voahosotra tsy mivadika, izay nanara-dia azy foana sy niara-nijaly taminy. (Fil. 3:10) Ho mpanjaka mandrakizay hiaraka amin’i Kristy izy ireo, satria nanaovana an’ilay fifanekena ny amin’ilay Fanjakana. (Apok. 22:5) Manan-jo hihinana ny mofo sy hisotro ny divay izy ireo mandritra ny Sakafo Harivan’ny Tompo.
16. Hazavao fohifohy ny Romanina 8:15-17.
16 Iza ihany no tokony hihinana ny mofo sy hisotro ny divain’ny Fahatsiarovana? Ireo manana porofo avy amin’ny fanahy fa zanak’Andriamanitra. (Vakio ny Romanina 8:15-17.) Nampiasa ilay teny aramianina hoe “Aba” i Paoly. Midika hoe “Ray ô!” izy io. Teny feno fitiavana sy fanajana toy ny hoe “dada” izy io, ary iantsoan’ny ankizy ny rainy. Hita amin’izany fa lasa manana fifandraisana manokana amin’Andriamanitra ny voahosotra, rehefa ‘manangana azy ireo ho zanaka’ ny fanahin’Andriamanitra. Mahazo antoka izy ireo fa voahosotra, satria io fanahy io sy ny sain’izy ireo no miara-manaporofo an’izany. Tsy hoe tsy te hiaina eto an-tany akory izy ireo. Matoky izy ireo fa hiara-manjaka amin’i Jesosy any an-danitra, raha tsy mivadika mandra-pahafatiny. “Mahazo fanosorana avy amin’ilay masina”, dia i Jehovah, izy ireo. Efa vitsy amin’ireo 144 000 mpanara-dia an’i Kristy sisa no eto an-tany. (1 Jaona 2:20; Apok. 14:1) Mahatsiaro ho tena akaiky an’i Jehovah izy ireo ka miantso azy hoe: “Aba, Ray ô!”
ANKASITRAHO NY FANANTENANAO
17. Inona no fanantenan’ny voahosotra, ary ahoana no fiheveran’izy ireo an’izany?
17 Azo inoana fa resahinao matetika amin’ny vavaka ny fanantenanao ho any an-danitra, raha voahosotra ianao. Tsapanao fa anisan’ireo lazain’ny Baiboly hoe ‘natolotra ho fofombadin’i Kristy’ ianao, ka tsy andrinao ny ‘hampakarany’ anao. (2 Kor. 11:2; Jaona 3:27-29; Apok. 21:2, 9-14) Rehefa milaza ny Soratra Masina fa tia an’ireo zanany ara-panahy Andriamanitra, dia mieritreritra ianao hoe: “Izaho izany.” Ary ahoana rehefa misy toromarika omen’ny Tenin’Andriamanitra ho an’ireo zanany ireo? Mandrisika anao hankatò an’ilay izy ny fanahy masina ka mieritreritra ianao hoe: “Mahakasika ahy izany.” Mahazo antoka ianao fa ho any an-danitra satria ny fanahin’Andriamanitra sy ny sainao no manaporofo izany.
18. Inona no fanantenan’ny “ondry hafa”, ary ahoana no fiheveranao an’izany?
18 Nomen’i Jehovah fanantenana hiaina eto an-tany kosa ianao, raha anisan’ny “vahoaka be” amin’ny “ondry hafa.” (Apok. 7:9; Jaona 10:16) Te hiaina mandrakizay ao amin’ny Paradisa ianao, ary faly misaintsaina an’izay lazain’ny Baiboly momba ny fiainana eto an-tany amin’ny hoavy. Irinao mafy ny hiaina ao amin’ilay tontolo anjakan’ny fiadanana, miaraka amin’ny fianakavianao sy ny olo-marina hafa. Miandrandra ny fotoana tsy hisian’ny mosary, fahantrana, fijaliana, aretina, ary fahafatesana ianao. (Sal. 37:10, 11, 29; 67:6; 72:7, 16; Isaia 33:24) Tsy andrinao koa ny hihaona amin’ireo hatsangana amin’ny maty, izay ho afaka hiaina mandrakizay. (Jaona 5:28, 29) Tena faly ianao fa nomen’i Jehovah fanantenana miavaka. Tsy mihinana ny mofo sy misotro ny divay ianao, nefa manatrika ny Fahatsiarovana mba ho fankasitrahana ny sorom-panavotan’i Kristy.
HO TONGA VE IANAO?
19, 20. a) Inona no tokony hataonao raha te hiaina mandrakizay ianao? b) Nahoana ianao no hanatrika ny Sakafo Harivan’ny Tompo?
19 Tsy maintsy mino an’i Jehovah Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny vidim-panavotana ianao vao ho afaka hiaina mandrakizay, na eto an-tany izany na any an-danitra. Ho afaka hisaintsaina ny fanantenanao sy ny maha zava-dehibe ny nahafatesan’i Jesosy ianao, rehefa manatrika Fahatsiarovana. Ataovy tanjona àry ny hanatrika azy io. Hatao ny zoma 3 Aprily 2015 aorian’ny filentehan’ny masoandro izy io any amin’ny Efitrano Fanjakana sy ny toeran-kafa maneran-tany, ary an-tapitrisany no hanatrika azy.
20 Hankasitraka kokoa ny sorom-panavotan’i Jesosy ianao raha manatrika Fahatsiarovana. Henoy tsara ilay lahateny. Ho lasa tia ny mpiara-belona aminao ianao amin’izay, ka hiresaka aminy an’izay fantatrao momba ny fitiavan’i Jehovah sy izay kasainy hatao ho an’ny olombelona. (Mat. 22:34-40) Ataovy àry izay rehetra azo atao mba hanatrehana ny Sakafo Harivan’ny Tompo.
^ feh. 1 Nanomboka taorian’ny filentehan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehan’ny masoandro ny ampitson’iny ny andro iray, tamin’ny Hebreo.
^ feh. 9 Jereo ny Tari-dalana Hianarana ny Tenin’Andriamanitra, fizarana 16.
Hizara Hizara Nahoana Isika no Mankalaza ny Sakafo Harivan’ny Tompo?